I-China iARICO-Ergonomic Leather Chair nguSihlalo wefektri kunye nabathengisi | KUMHO
USihlalo weOfisi ye-ARICO-Ergonomic Leather
Isitulo esijikelezayo esiphezulu seofisi; Isiponji zomngundo isihlalo & umva; I-aluminium emiselweyo i-armrest; EJamani "Bock" indlela yolawulo lwentambo, indawo ezi-3 zokutshixa, isihlalo ngokutyibilika, umva kunye nesihlalo esiqhagamshela icandelo lealuminium; Φ60MM PU caster, Imodeli yi-D65Y80 KGS yeklasi ye-4 yegesi
Isihlalo: Ngwevu, Mnyama, Khanya uBrown, Luhlaza, Ngwevu epholileyo, Brwon
Umyili waseJamani uPeter osebenza kwiPhondo loyilo kunye nezoBunjineli eyinto edumileyo yoyilo loyilo kunye nophuhliso lwemveliso, efumana amabhaso angapheliyo anje ngeRed Dot Design Award, i-IF Design Award neJamani Design Award. yenzelwe enye yezona zitulo zeofisi zithengisa kakhulu kumashishini amakhulu esitulo seofisi.
Kwinkqubo yokujonga abathengi kwakhona, kwafunyanwa iimfuno ezintsha zeemarike. Ngokuqhubeka kwengqwalaselo kuphuhliso kunye notshintsho lwendawo yeofisi yasekhaya kunye nokuqokelelwa kwengxelo yabathengi, uGoodtone wafumanisa ukuba kukho ukunqongophala kwesitulo esincinci sesikhumba esinamandla okuyila ngokukodwa kubaphathi abaphezulu kurhwebo lwasekhaya. Ukugcwalisa esi sithuba sentengiso, uGoodtone wenza isimemo sentsebenziswano kunye nomyili waseJamani uPeter Horn owaphumelela imbasa yeRed Dot Design kunye ne-IF Design Award, kunye noluhlu lwe-ARICO. Isibini, isihlanu uhlaziyo, iprototype iqala ukubonakala kwinkqubo yonxibelelwano rhoqo kunye nengxoxo nabaqulunqi, uyilo loyilo lwe-ARICO luphindaphinda luhlengahlengiswe. I-ARICO oyibonayo namhlanje yahluke kakhulu kuhlobo lokuqala lwe-ARICO. Yeyona nguqulelo ibalaseleyo emva kokubhukuqwa kunye notshintsho oluninzi kulungiso.
Egqithileyo Usihlalo weOfisi ye-Ergonomic yeOfisi
Okulandelayo: Ifashoni nguSihlalo weOfisi yeArhente ye4D
Sihlalo weSigqeba soLawulo
Usihlalo we-Ergonomic Mesh uSihlalo